Dukaamada Apple waxay la yeelan doonaan fadhiyo Music Lab ah oo lala yeelan doono Taylor Swift | Wararka IPhone
Marka hore, waxaan dhihi doonaa heesaaga Taylor Swift xiriirka uu la leeyahay Apple waa mid soo jireen ah oo waligoodba waxay lahaayeen xiriir wanaag ama xumaanba. Hadda heesaaha iyo shirkadda tikniyoolajiyadda ayaa mar kale waddooyinkooda ka tallaabaya si ay u bilaabaan safar cusub wadajir ah, xaaladdan Kulamada Muusikada Muusikada ee dukaamada saxiixa.
Waxaa la dhihi karaa fadhiyadaan waxa ay raadinayaan waa in lagu dhiiri galiyo hal abuurka adeegsadayaasha ka qeyb qaadanaya waana sababtaas sababta shirkada Cupertino ay in mudo ah u waday howlaha noocan ah ama aqoon isweydaarsiga. Mabda 'ahaan waa ka samee heeso heesta Waxaad ubaahantahay inaad isdejiso, kaas oo ku jira albumka cusub ee Taylor Swift, lover.
Dukaammada badankood ee dalkeenna waxaan sidoo kale ku leenahay aqoon-isweydaarsiyo firfircoon. Midkood wuxuu tixraacayaa habka soo saaraha Swizz Beatz, kaas oo leh waxaan ku baran doonaa ama ku horumarin doonnaa qaabkeena salka hip-hop, EDM iyo R&B. Hadaad rabto inaad kaqaybqaadato mid kamid ah fadhiyadaan si fudud waad iska diiwaan gelin kartaa xiriiriyahan oo raadi dukaanka ugu dhow ee Apple si aad hal-abuurkaaga u dhaqan geliso.
Waqtigaan la joogo ma hayno Shaybaarkan Muusikada oo Taylor Swift la heli karo, inkasta oo warka uu si rasmi ah u xaqiijiyay fannaanka oo ay ku dambayn doonto inuu soo dhowaado ama goor dambe. Farshaxanno kale ayaa "soo maray" kal-fadhiyada Apple Music Lab sida Billie Eilish ama xitaa heesta Madonna, laakiin sidaan dhahno, waxaa jira aqoon isweydaarsiyo badan oo lagu qabtay noocan ah muusigga muusigga si loogu dhiirrigaliyo dadka isticmaala.
Aqoon-isweydaarsigan waxaad u baahan tahay GarageBand iyo iPhone ama iPad, in kasta oo aan loo baahnayn inaad keento taada haddii aadan rabin maxaa yeelay Apple lafteeda ayaa ku siinaysa waxaad u baahan tahay si aad uga qayb gasho koorsooyinka, si fudud Aqoonsiga Apple ayaa ka badan inta ku filan in la qoro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Dukaammada Apple waxay yeelan doonaan fadhiyo Music Lab ah oo lala yeelan doono Taylor Swift